Ceerigaabo: Guddiga Nabadgelyada oo xubno Madax-dhaqameed ah xidhay iyo jawaabta Xukuumadda | Xarshinonline News
Ceerigaabo: Guddiga Nabadgelyada oo xubno Madax-dhaqameed ah xidhay iyo jawaabta Xukuumadda
Posted by xol2 on April 24, 2010 · Leave a Comment
Ceerigaabo, (NNN)- Guddiga Nabadgelyada gobolka Sanaag, ayaa Xabsiga u taxaabay ilaa 8 xubnood oo ka tirsan madaxdhaqameedka laba beelood oo wada dega gobolkaas, kuwaasoo dhowaan shaqaaqooyin dhexmareen.
Sida uu ku soo waramay Wariye Cali Aadan Daahir, Madaxdhaqameedkan oo Khamiistii doraad la qabqabtay, waxa uu xadhigoodu la xidhiidhaa ka dib markii muddooyinkii u dambeeyay dilal aanooyin salka ku hayaa dhexmareen labada dhinac.
Warku wuxuu intaa ku daray, in guddiga Nabadgelyadu madaxdhaqameedka iyo odayaashaa la xidhxidhay ku amartay in la keeno nin 15 February 2010 marxuum la odhan jiray Maxamed Mire Xasan ku dilay degaanka Ceel-qoxle oo ilaa 70 Km dhinaca Koonfureed ka xigta magaalada Ceerigabao iyo laba nin oo marxuum Cabdi Cabdillaahi Jibriil 15 April 2010 ku toogtay suuqa magaalada Ceerigaabo, kuna dhaawacay sarkaal Booliska ka tirsanaa, kuwaasoo dhamaantood baxsaday.
Falalkaas oo abuurtay xiisad dhexmartay labada dhinac, kuna sigatay in iska horimaad dhexmaro, waxa lagu demiyay ka dib markii maamulka gobolka, Madaxdhaqameed iyo waxgaradka Sanaag waanwaan ka galeen, kuna guulaysteen in la kala qaado laba maleeshiyo oo habeeno is hor fadhiyay.
Inkastoo aan la sheegin in xadhiga ay sabab u tahay amar-diido ka timi labada dhinac, haddana go’aankaa guddiga Nabadgelyada waxa lagu xidhxidhay; Chief Caaqil Maxamed Cabdi Soofe, Caaqil Aadan Ibraahim Jaamac, Caaqil Saalax Ismaaciil, Caaqil Axmed Maxamed Nuur, Cawil Aw Cabdi Ciise, Maxamed Cawil Faarax, Saleebaan Maxamed Faarax iyo Axmed Guulleed.
Dhinaca kale, mar aanu isku daynay in aanu la xidhiidho maamulka gobolkaas iyo qaybta Booliska Sanaag, si aanu wax uga waydiino sababta xadhiga Cuqaasha iyo odayaashaas, noomay suurtogelin in aanu helo. Hase yeeshee, Wasiirka Daakhiliga Somaliland Cabdilaahi Ismaaciil Cali (Cirro) oo xalay Wargeyska Ogaal wax ka waydiiyay arrintaas, waxa uu sheegay in Xukuumad ahaan ay qorshaynayaan sidii ay farogelin ugu samayn lahaayeen xurgufta u dhexaysa labadaa beelood. “Waqtigan (xalay) aan kula hadlayo ayaan xafiiskayga ka soo baxay, arrintaa Sanaagna wixii hore u dhacayba dhacee, sidaanu dhakhso ugu tegi lahayn ee aanu u farogelin lahayn baanu qorshaheeda wadnaa,” ayuu yidhi. Wuxuuna ka hadalka xadhiga Madaxdhaqameedkaa iskaga riixay maamulka gobolka Sanaag.
← Raaligelintu waxa ay siyaasidaa cimriga iyo caafimaad qabka haweenayda
Somaliland: Magacyada dhimashada, dhaawaca iyo wararkii u dambeeyay ee xaddiga khasaaraha Roobab ka da’ay dalka →